မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးများ
မြန်မာအင်္ကျီလုံချည်နဲ့ ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီး ၇ ယောက်
25 Apr 2018 . 12:41 PM
ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို ဝတ်ရင်လှပလွန်းတဲ့ မင်းသမီး ၇ယောက် ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာ ဝတ်စုံ ဖြစ်တဲ့ လုံချည်နဲ့ အင်္ကျီလေးတွေကို ဝတ်ပြီး သူတိုရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ပေါ်လွင်စေကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အမြင်ကို ကြည်လင်စေတယ် ဆိုတာကလည်း အနုပညာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပုံတင်တတ်တဲ့ မင်းသမီးလေးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အေးမြတ်သူဟာ များသောအားဖြင့် မြန်မာဝတ်စုံတွေကို သာရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တွင်းတစ်ခုလုံးမှာလည်း သူမအနေနဲ့ မြန်မာအင်္ကျီ လုံချည် ကို သာ ဝတ်ဆင်ပြီးရေကစားခဲ့တဲ့ ပုံတွေကိုတောင် သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာဝတ်စုံနှင့် ရိုးရှင်းလှပနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်အေးမြတ်သူ
သရုပ်ဆောင် သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ဟာ ကိုယ်လုံးအသားပေးဝတ်စုံတွေကို ဝတ်ဆင်တတ်ပေမယ့် လည်း မြန်မာအင်္ကျီလုံချည် ကို ဝတ်ဆင်တဲ့ အခါမှာလည်း လှပတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကပေါ်လွင်လွန်းလှပါတယ်။
သဉ္ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ မြန်မာပွဲတတ်ဝတ်စုံ နဲ့ အလှ
ယခင်ကမြန်မာဝတ်စုံ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး နဲ့လှနေတဲ့ သဉ္ဇာဝင့်ကျော်
မိုးဟေကို ဟာ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်လိုက်ရင် နန်းဆန်တဲ့ သူမရဲ့ အလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်ပြီး ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း မင်းသမီးတွေထဲမှာ မြန်မာဝတ်စုံတွေနဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပုံတွေ တင်တာများတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ဘေဘီမောင် ပါပဲ ။ သူမဟာလည်း မြန်မာဝတ်စုံတွေနဲ့ပိုမိုလိုက်ဖက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး ဝတ်ရင် ပို လှတယ်ဆိုတာကို သူမကိုယ်တိုင်လည်း ပိုသိလာလို့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပုံတွေကို အသားပေးပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လာတာပိုတွေ့ရပါတယ်။
Miss Universe Myanmar တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ဟာ မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်ရင် ကြည့်လို့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ကောက်ကြောင်းတွေထင်းနေအောင်ဝတ်ဆင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့လိုက်တဲ့ မြန်မာဝတ်စုံတွေကို ဖက်ရှင်ဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ မင်းသမီးရယ်လို့ ပြောလာရင်တော့ မအေးသောင်းကို မေ့လို့မရဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ဖက်ရှင်ပုံတွေ ဟာ အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေ တင်မကဘဲ အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ပါရရှိခဲ့တဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရော သူတို့ထဲ က ဘယ်သူ့အလှကို အကြိုက်ဆုံးလည်းဆိုတာ ပြောပြခဲ့ဦးနော်….
Photo Credit:Their Facebook and Page
မွနျမာအကငြ်္ီလုံခညျြနဲ့ ပရိသတျကို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီး ၇ ယောကျ
ရိုးရိုးယဉျယဉျ မွနျမာဝတျစုံလေးတှကေို ဝတျရငျလှပလှနျးတဲ့ မငျးသမီး ၇ယောကျ ကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ မွနျမာ ဝတျစုံ ဖွဈတဲ့ လုံခညျြနဲ့ အကငြ်္ီလေးတှကေို ဝတျပွီး သူတိုရဲ့ ကောကျကွောငျးအလှကို ပျေါလှငျစကော ပရိသတျတှရေဲ့ အမွငျကို ကွညျလငျစတေယျ ဆိုတာကလညျး အနုပညာတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ အခုလို ဝတျစားဆငျယငျပွီး လူမှုကှနျရကျမှာ ပုံတငျတတျတဲ့ မငျးသမီးလေးတှကေို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အေးမွတျသူဟာ မြားသောအားဖွငျ့ မွနျမာဝတျစုံတှကေို သာရှေးခယျြဝတျဆငျလရှေိ့တာတှရေ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သင်ျကွနျတှငျးတဈခုလုံးမှာလညျး သူမအနနေဲ့ မွနျမာအကငြ်္ီ လုံခညျြ ကို သာ ဝတျဆငျပွီးရကေစားခဲ့တဲ့ ပုံတှကေိုတောငျ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာတငျခဲ့ပါသေးတယျ။
မွနျမာဝတျစုံနှငျ့ ရိုးရှငျးလှပနတေဲ့ သရုပျဆောငျအေးမွတျသူ
သရုပျဆောငျ သဉ်ဇာဝငျ့ကြျောဟာ ကိုယျလုံးအသားပေးဝတျစုံတှကေို ဝတျဆငျတတျပမေယျ့ လညျး မွနျမာအကငြ်္ီလုံခညျြ ကို ဝတျဆငျတဲ့ အခါမှာလညျး လှပတဲ့ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးကပျေါလှငျလှနျးလှပါတယျ။
သဉ်ဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ မွနျမာပှဲတတျဝတျစုံ နဲ့ အလှ
ယခငျကမွနျမာဝတျစုံ ရိုးရိုးယဉျယဉျလေး နဲ့လှနတေဲ့ သဉ်ဇာဝငျ့ကြျော
မိုးဟကေို ဟာ မွနျမာဝတျစုံဝတျလိုကျရငျ နနျးဆနျးတဲ့ သူမရဲ့ အလှကို ပိုမိုပျေါလှငျစပေါတယျ။ မွနျမာဝတျစုံ ဝတျပွီး ပရိသတျကို ဖမျးစားနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျဆိုရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူး။
အခုနောကျပိုငျး မငျးသမီးတှထေဲမှာ မွနျမာဝတျစုံတှနေဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါပုံတှေ တငျတာမြားတဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျကတော့ ဘဘေီမောငျ ပါပဲ ။ သူမဟာလညျး မွနျမာဝတျစုံတှနေဲ့ပိုမိုလိုကျဖကျမှုရှိတာကိုတှရေ့ပွီး ရိုးရိုးယဉျယဉျလေး ဝတျရငျ ပို လှတယျဆိုတာကို သူမကိုယျတိုငျလညျး ပိုသိလာလို့ မွနျမာဝတျစုံလေးတှနေဲ့ပုံတှကေို အသားပေးပွီး လူမှုကှနျရကျမှာတငျလာတာပိုတှရေ့ပါတယျ။
Miss Universe Myanmar တဈဦးဖွဈတဲ့ မိုးစကျဝိုငျဟာ မွနျမာဝတျစုံ ဝတျရငျ ကွညျ့လို့ အငျမတနျကောငျးတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ကိုယျလုံးကိုယျထညျ ကောကျကွောငျးတှထေငျးနအေောငျဝတျဆငျထားတာမြိုးမဟုတျပဲ မွနျမာဝတျစုံနဲ့လိုကျတဲ့ မွနျမာဝတျစုံတှကေို ဖကျရှငျဆနျဆနျဝတျဆငျတတျတဲ့ အမြိုးသမီး အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
မွနျမာဝတျစုံနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ မငျးသမီးရယျလို့ ပွောလာရငျတော့ မအေးသောငျးကို မလေို့မရဘူးလို့ထငျပါတယျ။ အေးဝတျရညျသောငျးရဲ့ မွနျမာဝတျစုံနဲ့ဖကျရှငျပုံတှေ ဟာ အမြိုးသမီးပရိသတျတှေ တငျမကဘဲ အမြိုးသားပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးကို ပါရရှိခဲ့တဲ့ ပုံတှဖွေဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရော သူတို့ထဲ က ဘယျသူ့အလှကို အကွိုကျဆုံးလညျးဆိုတာ ပွောပွခဲ့ဦးနျော….